Mukulaal iyo Eey noqday “saaxiibbo” is jecel - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, CYNTHIA BENNETT
Henry (Eeyga) Baloo (Curriga)
Waa saaxiibbo aad qaali u ah, waxaa lagu kala magacaabaa Henry (Eeyga) iyo Baloo (Mukulaasha), wuxuuna xiriirkooda dhow ka yaabiyay adduunka, iyaga oo xitaa yeeshay dad badan oo ku xiran bog loo sameeyay, halkaas oo ay ka daalacdaan wadajirkooda.
Waxa ay dalxiis u wada aadaan dhulka baanaroomada leh ee buuralayda ah ee gobolka Colorado , Maraykanka, halkaas oo mulkiilayaasha labadan xayawaan ee rabbaayadda ah (Cynthia Bennett iyo Andre Sibilsky )ay kaga soo qaadaan sawirro qurux badan iyaga oo markasta wada socda, mararka qaarkoodna dusha isku xambaaraya.
Cynthia iyo Andre
Lammaanahan Cynthia iyo Andre ayaa sheegay in ay iyagu jecelyihiin dabeecadda iyo xayawaanka.
"Waxaan u jiheysanay dhanka galbeed, halkaas oo buuro waaweyn ay ku yaalaan, kadib ayaan nimid Colorado, qorshe badan ma aanan lahayn, balse waxaan go'aansanay in aan yeelano eey rabbaayad ah" ayay BBC-da u sheegay Cynthia.
Kadib waxa ay heleen Henry oo lagu hayay meel xayawaanka dayacan ama uusan qof lahayn lagu hayo , halkaas oo ay markiiba eeyihii kale isaga ka xusheen maadaamaa uu ahaa mid dadka jecel, markiina kusoo orday iyaga.
Muddo sanad kadib ah oo ay sawirrada Henry ku faafinaysay barteeda bulshada, ayay garoowsatay in ay u baahantahay xayawaan kale si ay arrimaha uga dhigto kuwa xiiso gaar ah yeesha.
Shiinaha oo shaqada ka joojiyay shirkadaha Kuuriyada Waqooyi
Muddo 3 sano ayay ku qaadatay in ciwaankeeda Instgram-ka uu gaaro 30,000 oo qof, kuwaas oo daalacda, balse markii ay soo heshay mukulaasha Baloo, ayay tirada cirkaas martay.
Markii la isu keenay mukulaashii iyo eeygii, markiiba waxaa dhexmaray xiriir aan caadi ahayn, waxayna noqdeen labo noole oo ay nafta ka dhaxayso, islamarkaasna markasta hoosta isaga jira.
Waxay noqdeen saaxiibbo meel kasta isku wehliya
"Waxaan u maleeyaa in Baloo (Curriga) uu u haysto in Henry (Eeyga) uu yahay hooyadiis, waxaana jirtay in bilihii koowaad uu ka raadin jiray naas uu ka nuugo" ayay tiri Cynthia.
Sawirrada iyo muuqaalo laga duubay xayawaankan, kuwaas oo muujinaya iyaga oo kooreysan (sidii fardihii) ayaa aad u qabsaday baraha bulshada dalka Maraykanka, iyaga oo ay dadka la dhaceen jacaylka ka dhaxeeya labadan xayawaan iyo xiriirkooda iyaga oo waliba kala ah labo bah oo xayawaanka ka mid ah.
Iyaga oo kooreysay, dusha isku xambaarsan
Andre waxa uu ka shaqeeyaa xafiis caadi ah, oo dhanka maaliyadda ah, balse ciwaankiisa baraha bulshada oo aad u caan baxay awgeed ayay xaaskiisa Cynthia waxa ay hadda biloowday in ay markasta wax galiso ciwaanka si loogu qabto hawlo suuq geyn ah iyo waliba xagga sawirrada., taas oo ah hawl ganacsi oo macaash badan laga heli karo.
Balse lammaanahan waxa ay sidoo kale ka walwalsanyihiin falcelinta taban ee dadka qaar ka imaanayso, hase yeeshee waxa ay sheegeen in dadka taageerayaasha ah ay aad uga badanyihiin kuwa sida xun u hadla.
TOOS Dowladda UK oo shaacisay mowqifkeeda ku aaddan aqoonsiga Somaliland
18 Jannaayo 2022
Maxaad ka taqaannaa saddexda magaalo ee UK ee laga aqoonsan yahay Somaliland?
Waa tee magaalada Somaaliyeed ee sixirka laga Qur'aan saarayo?